Antsirambina amin’ny tsy fanajana fepetra: nandrangaranga fihibohana ny Praiminisitra Ntsay Christian | NewsMada
Antsirambina amin’ny tsy fanajana fepetra: nandrangaranga fihibohana ny Praiminisitra Ntsay Christian
Par Taratra sur 01/04/2021
Mirongatra tanteraka ny coronavirus. Manaporofo izany ny antontanisa, indrindra ireo lavon’ny covid-19, tato ho ato. Manoloana izany, nanao antso avo sady fanairana ho an’ny rehetra ny Praiminisitra Ntsay Christian.
“Mba tsy hahatongavantsika amin’ny fihibohana tanteraka, mbola manao antso avo amin’ny vahoaka malagasy ny tenako ny amin’izay tokony ho fandraisana andraikitry ny tsirairay ary mba hahazoan’ny olona miaina malaladalaka”, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian, taorian’ny fanokafana indray ny Centre de traitement militaire Covid-19 (CTMC), Mahamasina. Raha tsy izany, voatery tsy maintsy maka fepetra lehibe no ho ny efa misy amin’izao fotoana izao ny fitondram-panjakana. Toy izany koa ny amin’ny fanaovana arotava ho an’ny olon-drehetra. Mbola maro ny olona tsy tonga saina ka tsy mampiasa izany amin’izao. Izay no tsy hahatongavana amin’ny fepetra sarotra kanefa tsy maintsy irosoana raha ilaina, satria zava-dehibe ny ain’ny Malagasy. Nasiany teny manokana amin’izany ny momba an’i Mahajanga, nefa azo tenenina koa ny toeran-kafa. Efa nampitomboana ny toerana ahazoana mandray ny marary ary jerena koa ny fampitaovana azy rehetra.
Tsy tokony hisy resaka politika aloha izao
Nisaorany ny mpiasan’ny fahasalamana manontolo manerana an’i Madagasikara, na sivily na miaramila. Manao ny ainy tsy ho zavatra izy ireo amin’izao fotoana izao, miatrika ady lehibe. “Ny fampirisihina azy ireo no mba irariako hataon’ny vahoaka malagasy, fa tsy fanelezana tsaho sy zava-tsy marina any amin’ny tambajotran-tseratsera“, hoy izy.
Etsy an-daniny, naneho hevitra momba ny resaka politika koa ny tenany. “Tokony hitandrina ihany ny olona mamoaka ireny fanambarana isan-karazany ireny, izay betsaka no diso. Ny isarihako ny isian’ny vahoaka malagasy: tsy fotoan’ny fanaovana politika izao, ary tsy fotoana mbola isian’ny tsaho”, hoy izy.